SHARON OO DOONAYA INUU KA QEYBGALO SHIRKA MADAXDA JAAMACADA CARABTA
Wasiirka koowaad ee Isael Ariel Sharon ayaa doonaya inuu ku sii siqo kulanka ay madaxda carabta ku leeyihiin magaalada Beirut ee wadanka Lubnaan arbacada soo socota, wareysi uu siiyey jariidada washington post ayuu sharon ku sheegay inuu doonaya inuu fursad helo uu ku soo bandhigo aragtidiisa ku wajahan soo jeedinta dhaxal sugaha boqortooyada Sucuudiga amiir C/lle. Madaxda Carabta ayaa lagu wadaa inay kaga wada hadlaan shirkooda nabadeynta Falastiin iyo Isael oo uu sacuudigu soo bandhigay.
Dhanka kale wali ma cada in Isael u ogolaan doonto hogaamiyaha Falastiin mudane Yaasir Carafaat inuu ka qeyb galo shirka jaamacada Caradta ee Beirut.
Si kastaba ha ahaatee waxay soo jeedinta sacuudiga xambaarsan tahay �Israel waa inay ka baxdaa dhamaan dhulkii ay carabta kaga qabsatey dagaalkii 1967dii kuna bedelataa aqoonsi ay aqoonsadaan wadamada xubnaha ka ah Jaamacada Carabta� hadaba dadka raac raaca ama sida aadka ah ugu dhuundaloola siyaasada Bariga dhexe ayay ugu muuqataa hal bacaad lagu lisay soo jeedinta sacuudiga, iyagaa sabab uga dhigayo hashiiskii Oslo oo ay hada ka soo wareegtey mudo ku dhow 10 sano qiyaastii ayaa Yahuuda iyo falastiiniyiintu waxay ku heshiiyeen heshiis halku dhigiisu ahaa Nabad ku bedello dhul oo macnaheedu markaa ahaa in falastiiniyiintu helaan dhamaan dhulkii ay yahuudu ka heysatey iyo dowladnimo halka yahuudana ay helaysay nabad heshiiskaas dhanka falastiiniyiinta waa ka hir galay oo yahuuda way heshay nabadii waxyna u adeegsatey ugana faa�iideysatey furfurida iyo iska horkeenka falastiiniyiinta dhexdooda, taasoo geyeysiisay in beerahoodii, guryahoodii, iyo xoolahoodiiba inay xidid siibto dakuna wali ma ilaawin sawirkii foosha xumaa oo murugada badnaa ee Maxamed Durra iyo kuwa kaba sii foolxumaa oo dumar foolanaya iyo ragoodii oo la xasuuqay, gargaarka deg deg ah sida Ambalaasyadii iyo Isbitaaladii la duqeeyey, gurmadkii caalamiga ahaa oo ka yimid Denmark iyo Sweden oo wadayaalka ambalaasyada ay ilaa iyo hada ay suurta gal u noqon la�dahay inay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda, ka dib markey Isael ku eedaysay wadayaasha falistiiniyiintu inay u shaqeynayaan Kacdoonka Al-aqsa.
Kacdoonka Al-Aqsaa ayaa Isael baday ayay aaminsan yihiin dad badni qasaaro aad u balaaran oo dhan walba ah iyo waliba go�aankii yaabka lahaa ee golaha amaanka ee qaramada midoobey oo ugu yeeray falastiin iyo Israel in ay yihiin labbo wadan iyo in Kofi Anan oo si aad ah u weeraro xadgudubka Israel, iyadoo la wada ogsoon yahay inka badan 50 sano in Isael ay ku raaxeysanaysay xasuuqa aan xadka laheyn ee lagu hayay dadka ra�idka ah ee reer Falastiin halka Qaramada midoobey oo Mareykanku hor kacayo ay gashaan u ahaayeen difaacna u ahaayeen maamulka Israel, waa sida dadkaas badani aaminsanyihiine. Soo jeedinta Amiir C/lle ayay ku tilmaameen in ay 10 sano oo dambe oo fursad ah siin karto Israel si ay u sii wadato xasuuqeeda, maadaama aan la aamini karin axdina aysan lahayn oo lagu aamino ayay ku soo gabagabeeyeen.
Dhanka kale dad aan sidaa u badneyn ayaa rumaysan in heshiiskaan miro dhali karo hadii labad dhinacba daacad ka noqdaan heshiisyada ay horey u wada galeen.
Si kastaba ha ahaatee la arki doonee halka uu ku dambeyn doono isku dayga cusub iyo sida uu u daboolo baahida xaquuqda aasaasiga ah ee dhibanayasha reer falastiin u qabaan iney helaan Dowlad u gaar ah oo ay jiritaankooda, sharaftooda aadinimo iyo maxastoodaba ku difaacaan.
Wakhtiguna waa socdaa taariikhduna way is qori.
BANNAANBAX KA DHACAY MINESOTA, [waxaa lagaga banaanbaxay dilkii marxuum Abu Qaasim]
Maxaabiista u Xirxiran Gumeysiga Itoobiya
Maxaabiistaas oo ku xirxiran xabsiyada Militari ee itoobiya ayaa Radio Xoriyo sheegay in.. Akhri halkan » 23/3
» NIGERIA: Dood Kasocota Maxkamad Kutaal Nigeria
�MPLS March 24: Ogaden Youth Association Inaugural Meeting
Jean Chr�tien, Ra'iisul wasaraha canada oo sheegay in uusan ogeyn wax xiriir ah oo ka dhexeeya al-Qaeda iyo Iraq. Waxa kale oo uuka hadlay Afrika ee Daawo.Video ama Akhri